ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: ဟိုဖက်ကမ်း နဲ့ ဒီဘက်ကမ်း
တယ်လေ. ဖုန်းနံပါတ် ငါရေးပေးလိုက်ရ မကောင်းရှိရော့မယ်
ဘယ်ဖက်ကမ်းကိုမှ မရောက်ဖူးသေးဘူး ညီရ..၊ တခါ လောက်တော့ လာကြည့်ချင်တယ်၊ ဒီမှာတော့ မြန်မာ တစ်ယောက်နဲ့ ဆုံဖို့ဆိုတာ ထီပေါက်တာထက် ပိုခဲယဉ်းပါတယ်...။
ကိုညီ ပြောတာဟုတ်တယ် ။ ဗမာတစ်ယောက်နဲ့ဆုံဖို့ ဆိုတာ ထီပေါက်ဖို့ထက်ခက်တယ် ။ ဒီဇင်ဘာပြန်ရင် မဲဆောက်ဘက်ကိုဝင်ခဲ့ဦးမယ် ။ ပြန်ခါနီးတော့မှ မောင်မျိုးဆီ တစ်ခါ ဆက်သွယ်ဦးမယ် ။ ပုန်းမနေဘဲ ကူညီပါဦး ။
နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ ..း))
သင်္ကြန်ရေနဲ့ ပျော်မြူးကြတယ် တုန်းချမ်းချမ်း တုန်ချမ်း
(ဘာဖြစ်နေတယ်မသိဘူး .. သင်္ကြန်သီချင်းကြီး ဆိုချင်နေတယ် .. :D) သင်္ကြန်ရေတော့ မထိရပေါင်ကွယ်
ထိုင်းဖက်ကမ်းက မြန်မာတွေအတွက် ဆိုးတယ်။ မြန်မာဖက်ကမ်းက လာသမျှ လူအားလုံးအတွက် ဆိုးတယ်။ ဒါပါပဲ ဆရာကိုမျိုးရယ် ---- မြ၀တီမှာ သင်္ကြန်အတက်၊ မဲ့ဆောက်မှာ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်ဗျ။ ဒါပေမဲ့ ထိုင်းတွေလည်း မြန်မာနဲ့ရောပြီး ဒီနေ့ညနေထိ ပက်ကောင်းတုန်းပဲ။ ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ နယ်စည်းခြားလို့မှ မရကောင်းတာပဲနော်။
ဟိုဘက်ကမ်းက မီးထိန်ထိန်...ဒီဘက်ကမ်းက မီးမှိန်မှိန်...
မိုးယံ...တင်ပေးလိုက်ပေါ့ ငါက အဲံ့လောက်မလျှိုတတ်ပါဘူးလေး)
ကိုညီ....ဟုတ်လား ဒီမှာတော့ အများကြီးပဲ ညီတို့အိမ်မှာတင် ၅ ယောက်လောက်ရှိတယ်း) ပျော်စရာကောင်းပါတယ် အားမငယ်ရတော့ဘူးပေါ့ .
ဟုတ်ကဲ့ပါ ခင်ဗျား လာလည်ခဲ့ပါအုံး ကျနော့်ဆီ မေးလ်ကြိုပို့ထားလိုက်ပါ myomaungg@gmail.com က ကျနော့် မေးလ်ပါ ပုန်းမနေပါဘူး ဆက်သွယ်လိုက်ပါဗျး)
အမည်မဲ့...ကျနော်တော့ အဲ့လိုမထင်ပါဘူး ဒါက သူငယ်ချင်းကြုံရတာက ဆိုးတဲ့အခြေနေမို့ ဆိုးတယ်လို့ပြောလိုက်တာပဲ ဖြစ်မယ် အားလုံးအတွက်ဆိုတယ်ဆိုတဲ့တော့ ကျနော်လက်မခံဘူးဗျး) ကျနော်လည်း စည်းမခြားပါဘူးဗျာ ဒါမယ့် ဗုံးသံ သေနတ်သံတွေကြားနေရတဲ့ဆီမှာ ကျနော်က ပျော်ပါတယ်လို့ရေးလိုက်ရင် ကျနော် မုသားသုံးသလိုဖြစ်နေမှာပေါ့ ဟဟား ကျေးဇူးပါ ကော့မန့်လေးအတွက် ကျနော်လည်း ဒီနေ့လိုက်လည်သေးတယ် ။
ကိုညိမ်းနိုင် ... မဆက်ပါဘူး ပေါက်ကရ ဘန်ကောက်ရောက်တုန်းက ဖုန်းကဒ်တစ်ခု ၀ယ်ပြီး ဆက်လိုက်ပါလို့ သေချာမှာထားတာကို ကိုယ့်ပါသာ ရေချိုးကန်ကိုသွားဖို့ပဲ အာရုံရနေပြီးတော့ ဟိဟိ ဖော်ပြီဗျ ။
If i have chance,i want to visit both side of the area but mee mee kyauk kyauk.Ko Nyi wroteabit twist cos he's hiding from his regular reader in same place:(
ကြီးတော်... လာလည်လေ လာတဲ့အခါကျ ကျနော့်ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပေါ့ ပျော်စရာပါး)
ကိုညီလား.... ဘလော့ဂါတွေက တစ်ခါခါ အဲ့လိုပဲ ဒီမှာတော့ ဆင်ဖမ်းမယ်လေး ကျားဖမ်းမယ်လေး ရေးတတ်ကြပေမယ့် အပြင်မှာကျတော့ ရှက်တတ်တယ်ဗျး) ကျနော့်ကိုယ် ကျနော်ပြောတာနော် ကိုညီ့ကိုပြောတာမဟုတ် သူက ရုပ်ဆိုးလို့နေမှာပေါ့ hiding လုပ်နေတာ တော်ကြာ ကြီးတော်က လန့်ပြီး စာသွားမဖတ်တော့ရင် ဒွတ်ခး))
ကျနော် ရီပလိုင်းပြန်တာ ဆိုင်ကော ဆိုင်ရဲ့လားမသိ အင်းဂိတ်လို သိပ်မတော်လို့ပါ ။
You are very clever.Tks for your invitation and reply.I try to practise myanmar typing.I prefer to communicate in our own language with our own people:(
တခေါက်ပဲရောက်ဖူး ပါတယ်။ တခါတည်း ဆုံးဖြတ်လိုက် တယ် နောက် မလာတော့ဘူးလို့။ :)